नोकियाले ल्यायो नयाँ स्मार्टफोन, केके छन् विशेषता र मूल्य कति ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
नोकियाले ल्यायो नयाँ स्मार्टफोन, केके छन् विशेषता र मूल्य कति ?
एजेन्सी । नोकिया ब्राण्डको स्वामित्व लिएको एचएमडी ग्लोबल कम्पनीले नोकिया ८.१ स्मार्टफोन लञ्च गरेको छ । नोकिया एक्स सेभेन स्मार्टफोनको ग्लोबल भेरिएन्टको रुपमा यो स्मार्टफोन कम्पनीले ल्याएको हो । दुबईमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै यो नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो ।
नोकिया ८.१ मा ४ जिबीको ¥याम हुनेछ । यसको मुख्य विशेषता भनेको २० मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा नै हो । यसका साथै यो स्मार्टफोनको ब्याट्री क्षमता पनि उच्च रहेको छ ।
यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको माथिल्लो भागमा डिस्प्ले नच रहेको छ भने तल्लो भागमा नोकिया लेखिएको छ । मेटल फ्रेमयुक्त यो स्मार्टफोनमा अक्टाकोर क्वालकोम स्नापड्रागन ७१० प्रोसेसर रहेको छ । यसमा २.५ डी कव्ड ग्लासको प्रयोग गरिएको छ । ६४ जिबी इन्टर्नल स्टोरेजलाई माइक्रो एसडी कार्डमार्फत ४ सय जिबीसम्म बढाउन सकिन्छ ।
सेल्फीका सौखिनका लागि यो स्मार्टफोनमा २० मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा रहेको छ । यसमा पनि फिक्स्ड फोकस लेन्स रहेको छ ।
यो स्मार्टफोनको वजन १७८ ग्राम रहेको छ । यसको लम्बाई १५४.८ मिलिमिटर लम्बाइ, ७५.७६ मिमि चौडाई र ७.९७ मिलिमिटर मोटाई रहेको छ । लञ्च गरिएको मोबाइलको मूल्य ५१ हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।